သက်ရောက်ဂဏန်းဗေဒင်ဟောကိန်း – ဗေဒင်သုတ
August 26, 2020 September 22, 2021 lwa	View : 9426
အနောက်တိုင်းသင်္ချာဗေဒဟု ခေါ်ဆိုသော ဂဏန်းဗေဒင်ပညာရပ်အရ လက်ရှိ မိမိ အသက်ပိုင်းကံကို အလွယ်တကူ တွက်စစ်ဟောပြောနိုင်သော နည်းတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးပါမည်။ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ် မွေးသက္ကရာဇ် အပြည့်အစုံမှ မွေးရက် ၊ မွေးလနှင့် အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်နောက်ဆုံးနှစ်လုံး (ရှေ့ဂဏန်း ထောင်ရာဂဏန်းပယ်) ပြီး တစ်လုံးတည်းပေါင်းပါ။ ရလာသော ဂဏန်းတစ်လုံးတည်းကိုမှ မိမိလက်ရှိ ရောက်ဆဲအသက်ပိုင်းနှင့် ဂဏန်းတစ်လုံးတည်း ရအောင် ထပ်ပေါင်းပါ။ ရလာသော ဂဏန်းအတိုင်း ဟောကိန်းကို ဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ – ၄. ၂. ၁၉၈၆ မွေးသူအတွက် တွက်မည်ဆိုပါက ၄+၂+၈၆ = ၉၂ = ၉ +၂ = ၁၁ = ၁+၁ = ၂ ၎င်းတစ်လုံးတည်းကို လက်ရှိအသက် ၃၄နှင့် ထပ်ပေါင်းသော် ၃၄ + ၂ = ၃၆ = ၃+၆ = ၉ ဂဏန်း တစ်လုံးတည်းသာ ကျန်ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်း ၉ ဂဏန်းအတိုင်း လက်ရှိအသက်ပိုင်း၏ ကံဇာတာကို ဖတ်ရှုရန် ဖြစ်သည်။ (ဗေဒင်သုတ Page ၏ မူပိုင်ဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။ အခြားသော Social Media Platform များ နှင့် Website များတွင် ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ)
၁-ဂဏန်းရသော အသက်ပိုင်း – လုပ်ငန်းသစ် စီမံကိန်းအသစ်များ ချမှတ်ရမည်။ မထင်မှတ်သောနေရာမှ ငွေဝင်မည်။ နေရာထိုင်ခင်း အပြောင်းလဲကောင်းများ ကြုံမည်။ ဘဝအတွက် ခြေလှမ်းသစ်များ ချမှတ်ရမည် ။ နှလုံး လည်တိုင် အရိုးအဆစ်နှင့်ပက်သက်သော ရောဂါများ သတိပြုပါ။ အစ်ကိုကြီး၊ အစ်မကြီးတို့နှင့် ပက်သက်သော သတင်းစကားများ ကြားသိရမည်။ ပညာကံ စာမေးပွဲကံ ကောင်းသော ကာလဖြစ်သည်။
၂-ဂဏန်းရသော အသက်ပိုင်း – ခရီးများ သွားလာရမည်။ စိတ်ခံစားမှုဘက် ပိုမို ဦးစားပေးတတ်သော ကာလဖြစ်မည်။ မိသားစုတွင်း အလှူအတန်းကိစ္စများ ကြုံရမည်။ နီးစပ်ရာ၊ ခင်မင်ရသော ပုဂ္ဂိုဟ်များနှင့် စကားများရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝန်းတွင် သမီးမိန်းကလေးဖွားမြင်သော နိမိတ်များ ကြုံပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ခရီးကိစ္စ ပေါ်ပေါက်ခြင်း ငွေဝင်ခြင်းရှိမည်။ သွေးတိုး သွေးကျ ရောဂါနှင့် အစာအိမ် ရောဂါများသတိပြုပါ ။ မည်သည့်ကိစ္စကိုမျှ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍ လုပ်ရန် အခွင့်မသာသော ကာလဖြစ်သည်။
၃-ဂဏန်းရသော အသက်ပိုင်း – စိတ်ကူးထားသည်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ စွန့်စားပြီး လုပ်ရသောကိစ္စများ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် မေတ္တာရေးအတွက် ကောင်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။ လုပ်ငန်းငွေကြေးစီးပွားတိုးတက်မည်။ လုပ်ငန်းနေရာ ရာထူးကိစ္စများ တိုးတက်မှုရှိမည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မှုရမည်။
၄-ဂဏန်းရသောအသက်ပိုင်း – မိသားစုကျန်းမာရေး ခြူခြာအားနည်းတတ်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဆည်းပူးခြင်းများအတွက် ကောင်းသည်။ တစ်ခုထက်ပိုသော လုပ်ငန်းတာဝန်များထမ်းဆောင်ရမည်။ ယဉ်ကား စီးနှင်းခြင်း မောင်းနှင်ခြင်းများ သတိပြုပါ။ လောဘကို ရှေ့တန်းတင်၍ လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးချဲ့ခြင်းများ ဆိုင်းငံ့ထားပါ။ (ဗေဒင်သုတ Page ၏ မူပိုင်ဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။ အခြားသော Social Media Platform များ နှင့် Website များတွင် ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ)
၅-ဂဏန်းရသောအသက်ပိုင်း – အစစအရာရာ သတိထားသင့်သော ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်သည်။ ရန် အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက် ဆုံတွေ့ရတတ်သည်။ သည်းမခံနိုင်ပါက အမှုပြဿနာ ဖြစ်ပွားလွယ်သည်။ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ဖြစ်ရတတ်သည်။ သူတပါးကိစ္စ ကြားဝင်ယူ အာမခံခြင်းများ ရှောင်ပါ။ ကတိစကား ပေးလွယ်တတ်ခြင်းမျိုး ရှောင်ပါ။
၆-ဂဏန်းရသော အသက်ပိုင်း – ရေရှည်စီမံကိန်းချမှတ် လုပ်ဆောင်သော ကိစ္စများ အဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ ငွေဝင်မည်။ နှလုံးသားရေးရာ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမည်။ မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးများထံမှ အကူအညီ ရမည်။ အကျိုးတူစီးပွားလုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးအောင်မြင်မည်။ ခရီးကောင်းများ သွားလာရမည်။ (ဗေဒင်သုတ၏ မူပိုင်ဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။ အခြားသော Social Media Platform များ နှင့် Website များတွင် ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ)
၇-ဂဏန်းရသော အသက်ပိုင်း – ပစ္စည်း ပျောက်ရှတတ်သည်။ ကာလရှည်ကြာစွာ အနစ်နာခံလုပ်ခဲ့သော ကိစ္စများမှ ကောင်းကျိုး ခံစားရမည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့်ပက်သက်သော ရပ်ဝေးနှင့်ပက်သက်သောကိစ္စများ အဆင်ပြေ အောင်မြင်မည်။ ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးခြူခြာအားနည်းတတ်သည်။ မထင်မှတ်သောခရီးသွားရမည်။
၈-ဂဏန်းရသော အသက်ပိုင်း – ထူးခြားဆန်းကြယ်သော ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆုံတွေ့ရတတ်သော အသက်ပိုင်း ဖြစ်သည်။ ထီပေါက်ခြင်း ထီပေါက်သကဲ့သို့ ငွေအစုလိုက်၊ အပုံလိုက် ဝင်ခြင်းက ကံပေါ်ထွန်းသည်။ ထူးခြား ကောင်းမွန်သော အပြောင်းလဲကောင်းများ ပေါ်ထွန်းမည်။ အခက်အခဲများ မည်မျှကြုံစေကာမူ အဆင်ပြေသွားမည်။ (ဗေဒင်သုတ Page ၏ မူပိုင်ဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။ အခြားသော Social Media Platform များ နှင့် Website များတွင် ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ)
၉-ဂဏန်းရသော အသက်ပိုင်း – ပြဿနာအခက်အခဲများ တတ်သော နှစ်ဖြစ်သည်။ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမတိုင်း နေသင့်သော ကာလ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရမည်။ ယာဉ်၊ ကား နှင့်ပက်သက်သော မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ သတိပြုထားသင့်သည် ။ ကိုင်တွယ် သုံးစွဲနေကျ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်ယွင်း လွယ်တတ်သည်။ ကံဇာတာ အားနည်းနိမ့်ကျသော အသက်ပိုင်းဖြစ်ပေသည်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းမြေ့ကြပါစေ – ဆရာလင်းဝေအောင် (မြန်မာ့ရိုးရာ ဆန်းကျမ်းဗေဒင်နှင့် ကေပီရှေ့ဆောင်နက္ခတ်ပညာရှင်)
← အရောင်များ၏ အစွမ်းသတ္တိ
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် ဒီတစ်နှစ် အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး ဟောကိန်း →